Allgedo.com » 2012 » December » 01
Home » Archive Daily December 1st, 2012
Howlgallo ay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbad Hoose ka sameeyeen ciidamada dowlada ayaa waxa lasoo sheegayaa in lagu qabtay dad garaya ila 8 Howlgalkan ayaa ka danbeeyay kdib qarax qasaaro gaystay oo xalay ciidamada kusugan Kismaayo lagula eegtay gudaha magaalada. Qaraxan aya si gar ah ciidamada kusugan magaalada lagula eegtay Warshada Hilibka ee Magaalada Kismaayo iyadoona ay jiraan...
Magaalada Muqdisho waxaa muddo dadku ay ka cabanayean lacago farabadan oo ay gadiidleydu dadku ka qadaan, taa oo aheyd mid marwaliba shacabku wadna qabad ku aheyd oo ay siweyn u hadal hayeen. Marwaliba lacagahaasi waxaa ay ahaayeen kuwo shaar loo galiyo oo wadayaasha gaadiidka ay Shegaan lacago isbaarooyin ah oo lacaga qaado iyo Shidaalka oo qaali ah Inkastoo ay dhici karta inay wax uun ka jiraan. Lakiin...
Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Jowhar ayaa shegaya in ciidamo ka tirsan Alshabaab ay ku dagaalameen duleedka magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhexe. Duleedka magaalada Jowhar waxaa ku dagaalamay ciidamada Alshabaab oo qaarkood la shegay inay doonayeen inay kasoo baxsadaan magaalada si ay ugu biiraan Dowlada Soomaaliya. Dhalinyarada goosan rabtay ayaa laga warhelay waxaana loo galay...
Dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka Shalanbood ee Gobolka Sh/Hoose
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Shalaambood ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in al shabaab weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dawlada kulahaayeen deegaankaasi. Weerarka ayaa waxa uu ahaa mid la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoona khasaaro xoogan kala gaareen dhinacyadii dagaalamay. Deegaanka shalaambood ayaa waxa la sheegay in xaaladeeda saaka ay deggan tahay kadib markii...
Lafoole: Waxyaabaha Qarxa iyo Shabaab-kii watay oo gacanta lagu dhigay
Ciidamada nabad sugida gobolka Sh/Hoose ayaa gacanta kusoo dhigay waxyaabaha qarxa iyo dadkii watay oo la sheegay in ay Shabaab yihiin . Howlgallo xalay ay ciidamada nabad sugida ka sameeyeen deegaanada degmada Afgooye gaar ahaan Lafoole ayaa waxay kusoo qabteen hub iyo waxyaabaa qarxa. Baaritaanada ayaa waxa ciidamada Dowlada ay ka sameeyeen dhamaan xaafadaha degmada Lafoole ee Gobolka Shabeelaha...
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in waayadan kulan balaaran uu halkas uga soconayay maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee bartamaha Soomaaliya iyo xubno ka socda dowlada Soomaaliya. Kulamadan Maalmihii ugu dambeeyay uga socday Galgaduud masuuliyiin ka tirsan Ahlu sunna iyo maamulka Dowlada Soomaaliya ee Gobolada Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo qaramayn...